पौराणिक शिक्षा प्रणालीलाई अल्बिदा | Kullabs
पौराणिक शिक्षा प्रणालीलाई अल्बिदा
नेपालको शिक्षा प्रणाली तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ? हामी जस्तै युवा जमातलाई सोध्नुभयो भने प्रायः एउटै खालको जवाफ आउला - पौराणिक। अब पौराणिक भनेपछि तपाईंहरुलाई ऋषि - मुनिहरु पिपलबोट को चौतारीमा बसेर आफ्ना चेलाहरुलाई तलतिर राखेर ज्ञान बाडिरहेको दृश्य याद आउला। अब अहिलेको अवस्था त त्यस्तो छैन नै तर पनि पढाईको तरिका भने उस्तै नै छ। एकजना शिक्षकले आफ्नो किताब हेर्दै मुखको बाणीका भरमा विद्यार्थीहरुलाई ज्ञान दिन खोजिरहेको देखिन्छ - विशेषत: हाम्रा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा। ल अब आफैं सोच्नहोस् , युग नै परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षा प्रणाली किन परिवर्तन हुन सकेन त?
त्यो युगौं पुरानो शैलीलाई अब परिवर्तन गर्ने बेला भएन र? भयो भन्ने जवाफ तपाईंको मनले दियो भने कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मनमा आयो होला। म जस्तो अहिलेका युवाले भने प्रविधिको प्रयोगले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्लान्।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अहिले विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोगलाई मान्यता त दिन थालिएको छ तर के ती सफ्टवेयरहरु एउटा साधारण सामुदायिक बिद्यालयमा प्रयोग गर्नको लागि महँगो हुँदैन र? के लाखौंपर्ने ती सफ्टवेयरहरुको सहि सदुपयोग हुन सकेको छ त? हाम्रो देश जहाँ भौगोलिक विभिदताको कुनै बिकल्प छैन, यहाँ ईन्टरनेट बेस्ड सफ्टवेयरलाई सर्भिसका रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने हरेक बिद्यालयलाई डिजिटल रूपमा संचालन गरेर एउटा शैक्षिक क्रान्तिनै ल्याउन सकिन्छ जसले यो देशको ९०% भन्दा बढी जनतालाई शिक्षित बनाउन सहयोग गर्नेछ।
सायद यही कुरा बुझेर नै होला शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक बिद्यालयहरुमा ब्रोड्ब्यान्ड ईन्टरनेटको जडान र प्रयोगलाई प्राथमिकता हालसालै दिएको छ। तर के ईन्टरनेट मात्र यो समस्याको समाधान हो त? ईन्टरनेटको प्रयोगले मानिसको हातहातमा सारा संसारनै पुर्याई दिन्छ अहिलेका स्मार्ट भनाउदा फोनहरुको माध्यमबाट। ईन्टरनेटलाई हाम्रो शैक्षिक प्राणालीमा सदुपयोग गराउन के गर्नुपर्ला भन्ने कुरामा भने कमै नीतिनिर्माता र बिद्यालय संचालकहरुको सोच पुगेको छ होला।
Youtube र Facebook कै संसारमा हाम्रो बिद्यालयहरुको ईन्टरनेटको ब्यान्ड्विड्थ खपत हुँदै छ जुन करोडौं खर्च गरेर ती सामुदायिक बिद्यालयमा जडान गरेको छ। अब के त्यो पैसाको सदुपयोग भयो त?
यी भए ईन्टरनेट र शिक्षा मन्त्रालयका कुरा। अब हाम्रो कुरा गरौं। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ईन्टरनेटको प्रयोग गरि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेर हाम्रो एउटा युवा समुहले पछिल्लो ३ बर्षदेखि www.kullabs.com मा "अब स्मार्ट बन्छन् स्कुल" नारा लिएर ईन्टरनेट प्रयोग गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक, बिद्यालय र कलेजहरुका लागि प्रयोग योग्य शैक्षिक सामाग्री तयार पारेर अन्लाईन रूपमा सित्तैमा बितरण गर्दै आएका छौँ। हाम्रो इच्छा भनेको नेपालको हरेक बिद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाएर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु हो। आउनुहोस्, यस kullabs.com को पहुँचलाई हरेक विद्यार्थी, शिक्षक, स्कुल र कलेजमा पुर्याउन सहयोग गरेर हाम्रो "देशब्यापी डिजिटल शिक्षा" अभियानलाई अगाडि बढाएर शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सहयोग गरौं।